Torohevitra 8 momba ny karazana Spiekermann (Infographic) | Famoronana an-tserasera
Lua louro | | Graphic Design
Erik Spiekermann dia anisan'ny mpanao typographer be mpahalala eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fotoana vitsy lasa izay dia nilavo lefona ity matihanina momba ny typografika ity Font Shop rakitra PDF tena fanabeazana izay mikendry ny hitarika antsika amin'ny fampiasana marina ny singa typografika sasany.
Avy eo dia ho hitanao, ao amin'ny anay Sary torohay, ireo torohevitra 8 momba ny typografika nomen'i Erik Spiekermann antsika mba hamolavolana endrika / famolavolana tsara. Mitandrina:
1 Spiekermann's 8 Typographic Tip Infographic
1.1 Mampiasà satroka kely fa tsy sora-baventy
1.2 Mampiasà sora-mandry mba hanasongadinana
1.3 Ampiasao ny tsipika fa tsy ny tsipika mahazatra
1.4 Teny fohy miolakolaka, azafady
1.5 Isa sy tabilao Elzevarian
1.6 Mampiasà ligy foana
1.7 Lahatsoratra mifanaraka amin'ny ankavia, tsy azo hamarinina velively
1.8 Lisitra misy isa
Spiekermann's 8 Typographic Tip Infographic
Mampiasà satroka kely fa tsy sora-baventy
Ary eto dia tsy maintsy asongadintsika. Soloy ny renivola ho an'ny satroka kely amin'ireo toerana izay tsy maintsy hilazanao fanafohezana na fanafohezana, toy ny amin'ny CD-ROM na ny endrika fisie PNG, JPEG, PDF… Ahoana no hampiasako ireo takelaka kely? Safidio ny teny tianao hovaina. Ao amin'ny InDesign sy sary, sokafy ny fikandrana Character (Menu Window> Type> Character). Mandehana any amin'ny zorony ambony ankavanan'ny voalaza panel ary tsindrio ny kisary izay mampiseho zana-tsipika sy tsipika marindrano. Rehefa tonga eo dia kitiho ny safidy "Caps Caps" (amin'ny teny anglisy, Caps kely).
Mampiasà sora-mandry mba hanasongadinana
Raha te hametraka ianao fanamafisana amin'ny teny iray amin'ny lahatsoratrao dia aza mampiasa sora-baventy. Ny zavatra marina tokony hatao dia ny mampiasa sora-mandry.
Ampiasao ny tsipika fa tsy ny tsipika mahazatra
Raha atao banga, rehefa manindry ny script amin'ny fitendry isika, ilay mivoaka dia ilay mahazatra. Fa i Erik Spierkermann dia mamporisika antsika ampiasao ny dash ("em dash")satria mihevitra ny halavan'ilay teo aloha ho fanelingelenana. Inona avy ireo fanalahidy tokony hoterentsika hahatratrarana azy? Tsindrio fotsiny ny Alt miaraka amin'ny tsindry dash amin'ny mac. Ao amin'ny Windows, Ctrl + dash key.
Teny fohy miolakolaka, azafady
Hay karazan-teny nalaina: ny apostrophes, izay ny teny nalaina mahitsy, ireo teny nalahatra miolakolaka izay mampatsiahy antsika ny isa 66 sy 99; ary ireo teny nalaina Espaniola. Amin'ny alàlan'ny default, angamba, rehefa tsindrio ny marika nalaina, apostrophes no tena azonao. Ahoana ny fampiharana ireo marina ao amin'ny Illustrator, mandehana amin'ny menio File> Setup Document. Ao amin'ny faritra ambany amin'ny varavarankely, kitiho ny safidio marika fampiasana teny nindramina. Safidio avy eo ny fiteny izay hanoratanao (raha ny aminay, Espaniôla) ary safidio ny kisary mifanaraka amin'izany teny mitanisa miolakolaka (ny voalohany amin'ny lisitra latsaka). Mba hamaranana dia tsindrio OK.Ao amin'ny InDesignRaha manana mac ianao dia mandehana any amin'ny InDesign> Preferences> Rakibolana. Raha manana Windows ianao, mandehana mankany amin'ny Edit> Preferences> Rakibolana. Misafidiana fiteny iray ao amin'ny menio misy fiteny, ilay mifanentana. Avy eo, amin'ny Quote, safidio ny teny nalaina roa sosona. Amin'ny fomba haingana sy mahazo aina kokoa, hampavitrika na hamono ny safidinao Mampiasà teny nindramina tsy maintsy hanery ireto fanalahidy manaraka ireto ianao: Shift + Ctrl + Alt + '(Windows) na Shift + Cmd + Alt +' (Mac).
Isa sy tabilao Elzevarian
ny Isa elzevarian Izy ireo dia ireo tarehin'ny fomba taloha, boaty ambany. Mifanaraka tsara kokoa amin'ny lahatsoratra ireo. Amin'ny fampiasana desimaly, dia mila jerena manokana ny lalao, raha ny lisitr'ireo tarehimarika isaky ny tsanganana, ny fametrahana ireo teboka (araka ny hitanao eo amin'ny sary). Mba hanitsiana ny toerana misy azy dia ilaina ny manandrana manaparitaka ireo teboka ary mandray ny sakan'ny isa tsirairay.
Mampiasà ligy foana
Ny fifandraisana dia manatsara ny famakiana ny lahatsoratra iray, noho izany dia ilaina ny mampavitrika azy ireo isaky ny afaka manao izany isika. Ilaina ny mahafantatra mialoha fa tsy ny endritsoratra rehetra dia mamela ny fampiasana ligy, satria tsy misaintsaina azy ireo izy: miseho indrindra amin'ny endritsoratra maimaim-poana, izay tsy ampy azy ireo. manome alalana ligatur ao InDesign? Safidio ny mpivady litera tianao ampiharina ligature (ohatra, ff, tt, ft…). Sokafy ny tontonana Character (Window> Type> Character) ary eo amin'ny zorony ambony ankavanana dia hahita zana-tsipìka misy tsipika ianao. Tsindrio eo ary ampandehano ny safidy Ligature. Ary manao ahoana ireo ligatur ao amin'ny Illustrator? Safidio ny mpivady litera tianao ampiharina ligature (FF, tt, ft…). Sokafy ny tontonana Open Type (Window> Type> Open Type). Raha manohana ligature io endri-tsoratra io dia afaka misafidy ny kisary voalohany hitanao ao amin'ilay takelaka misy ny litera fi.
Lahatsoratra mifanaraka amin'ny ankavia, tsy azo hamarinina velively
Manamarina lahatsoratra iray Ny fampiasana ny safidy mitondra anarana toy izany izay hitantsika amin'ny programa marobe (InDesign, Illustrator, Word, PowerPoint…) no fanapahan-kevitra typographic ratsy indrindra azontsika raisina. Ny zavatra ataony dia ny mamorona toerana fotsy mitsivalana mahatsiravina eo afovoan'ny lahatsoratra fantatra amin'ny hoe renirano. Misy vokany ratsy amin'ny famakiana ny lahatsoratra, ankoatra ny zavatra hafa. Ny torohevitra omena antsika, dia ny fampiasana ny mifanaraka amin'ny ankavia. Ny famoahana ny lahatsoratra voamarina amin'ny tanana dia asa sarotra, misy fiantraikany amin'ny haben'ny pejy, ny tsanganana, ny endritsoratra ary ny endrik'ilay litera. asa talenta sy marina izay manam-pahaizana vitsivitsy ihany no afaka manatanteraka am-pahakingana.
Lisitra misy isa
Aza mampiasa hyphens amin'ny lisitra iray. Erik Spiekermann dia manolotra ny fampiasana teboka, ny habeny mifanaraka amintsika indrindra. Raha mampihatra azy ireo dia azonao atao ny manandrana ireto fitambarana fanalahidy manaraka ireto: • Alt + 8 (Mac), Alt + 0149 (Windows)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Torohevitra 8 momba ny karazana Spiekermann (Infographic)
Anddy dia hoy izy:
Mahatsapa aho fa misy hadisoana ny fandikana ilay infographic.
Amin'ny fomba ahoana ry zalahy, ilay fampandrenesana "Fampiasana cookies" dia mitazona ahy antsasaky ny efijery amin'ny findaiko.
Valiny tamin'i Anddy
Magdalena dia hoy izy:
Heveriko fa ao amin'ny infographic, ny teboka farany, dia mamporisika ireo hyphens ho an'ny lisitra iray fa tsy ireo teboka;)
Valio i Magdalena
Lua louro dia hoy izy:
Bibikely infografika raikitra, misaotra tamin'ny fampitandremana!
Valiny tamin'i Lúa Louro
DAni Bcn dia hoy izy:
Tiako ny latabatra / fandaharana! antsipiriany tena tsara ao amin'ny lahatsoratra :)
Valiny tamin'i DAni Bcn
Maso; na dia tsara sy manan-kery amin'ny ankapobeny aza ny toroheviny, Spiekerman dia mampiasa fenitra tsipelina ho an'ny anglisy. Ary misy fahasamihafana miavaka; ohatra:
• Amin'ny Castilian (na Espaniôla) dia hanomboka ny ambaratongan'ny mari-teny nalaina (ary tsy raharahina matetika loatra izany fa efa heverin'ny mpanoratra sasany ho safidy iray) miaraka amin'ireo marika «Latina», narahin'ny (raha ilaina ny mamoha indray mari-teny nalaina alohan'ny nanidiana ny voalohany) ny "Anglisy", ary farany (raha ilaina ny manokatra ny teny miverina fanintelony) dia "quote tokana" no ampiasaina. Ohatra iray: Namaly i Benito: «dia hoy izy tamiko 'tokony handeha ianao' ary nihaino azy aho».
• Fahasamihafana iray hafa (saro-pantarina): amin'ny teny Espaniola ireo tsipika manamarika zana-pizarana; ny «em dash» dia antsoina hoe tsipika, tsotra, fa tsy tsipika fohy - apetraka tsy misy habaka izy ireo raha ny momba ny lahatsoratry ny fizarana (-so- ary tsy -so-).
• iray hafa: ny bala na bala (•) dia ampiasaina amin'ny fitanisana, fa ny teboka na ny teboka afovoany (·) dia tsy.
Fantatro fa toa hafahafa ireo zavatra ireo tamin'ny fotoana voalohany nahitana azy ireo, fa raha ny tena izy ny zava-mitranga dia ny tsy fisian'ny fahalalana (na ny fahalianana) momba ny orthotypography no mitarika antsika hanao sy hitovy amin'ny mahazatra izay tena izy fa lesoka. Mety ho zavatra mitovy amin'ny, ohatra, ny fanoratana "Mejiko" na "Vilvao" na "hautomobil" ho an'i "Mexico", "Bilbao" ary "fiara" ary, amin'ny famerenana ny lesoka, dia toa marina sy ara-dalàna (ary amin'ny raha ny marina, raha mamerina ela be izy ka miparitaka, mety ho izany, saingy raharaha hafa io.)
Misy boky be dia be (tsy be loatra, marina) momba an'io lohahevitra io (orthotypography); Ary tsara ny misy eo an-tànana raha toa ianao ka tafiditra ao na liana amin'ny asa fanaovan-tarehy aza, na dia indraindray aza.
Salama Dani, misaotra betsaka anao nanome hevitra mahaliana toy izany. Noho ny alalanao dia hanao andiana fanovana amin'ny lahatsoratra miorina amin'ny fahalalanao aho. Fanontaniana iray: raha tsy ampiasaina amin'ny fanisana ny teboka manidina, inona no ampiasaina amin'izany?